अव नेपालमा कहिलै लोडसेडिङ तालिका आउदैन : मन्त्री शर्मा — Motivate News
काठमाडौं – उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँग ‘बिजुली सम्वाद’ गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबार छिर्दा एकजना कर्मचारीले मन्त्रीलाई भनिरहेका थिए, ‘म मन्त्रीज्यूलाई मेरोबारेमा एउटा सानो बिन्ती बिसाउन आएको ।’
कर्मचारीको टिप्पा उडाउँदै मन्त्री शर्मा कड्किए, ‘मलाई बिन्तीसिन्ती केही बिसाइरहनु पर्दैन । सरकारले अह्राएको ठाउँमा गएर काम नगर्ने र अटेर गर्ने रु तपाई मन्त्रीलाई समेत नटेर्ने रु जानोस्, तपाईले मलाई चिन्नुभएकै रहेनछ, सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर काम नगर्ने हो भने तपाईलाई कारवाही गरिन्छ । कर्मचारी भएर सरकारले अह्राएको काम नगर्ने तपाई रु यहाँबाट गइहाल्नोस् ।’
कर्मचारीको सातो खाएर कार्यकक्षबाट बाहिर निकालेपछि मन्त्रीले हामीसँग बातचित सुरु गरे ।
मन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै भने, ‘तपाईहरु तार र नटबल्टुतिर आँखा नलगाउनोस्, बरु अरुणमा शेयर हाल्ने व्यवस्था गरिदिउँला ।’
उनले थपे, ‘काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, नगर्नेलाई सजायँ पनि दिनुपर्छ । अनिमात्रै देश अगाडि बढ्छ ।’
पूर्वराजाकी आमा रत्नको निवासमा बिजुली काट्दा तपाईको चर्को विरोध भएको थियो । केहीले सडकमा जुलुस पनि निकालेका थिए । के त्यो ‘एक्शन’ लोडसेडिङ अन्त्य गराउनकै लागि थियो ?
त्यतिबेला लाइन काट्दा मलाई चर्चित हुन खोज्यो भने । पहिलेको उर्जामन्त्रीले पनि यस्तै गर्‍याथ्यो, यसले पनि त्यही गरेर पपुलर बन्न खोज्यो पनि भने । तर, म लाइन काट्दै हिडिँन ।
एकदिन विद्युत प्राधिकरणको वाषिर्कोत्सवमा जाँदा सबभन्दा बढी नाफामा जाने यो संस्था घाटामा किन छ भनेर सोधें । उत्तर के आयो भने( विद्युतको पैसा तिर्दैनन् त्यसकारण यस्तो भएको हो ।
कतिपयले कुलेखानीमा पानी हुञ्जेल खोलेर लोडसेडिङ हटाएको भन्दैछन् । यसरी कतिन्जेल धान्नुहुन्छ ?
अहिले आएको त नक्कली बिजुली हो पनि भने । यसले दिएको बिजुली बाल्नुहुँदैन भनेर कतिपयले बत्ति नै निभाए रे भन्ने पनि सुनें !
तर, सुख्खायाम सुरु भएपछि फेरि लोडसेडिङ हुन्छ भन्छन् नि रु सुक्खायाममा लोडसेडिङ हुन नदिने के योजना छ ?
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्लान जनार्दन शर्माको हो कि कुलमान घिसिङको ?
यहाँ (मन्त्रालयमा) आएर मैले प्रयास गरें । पुरानै नेतृत्वमा काम अगाडि बढाएँ । ढल्केबरमा दौडिएर जाने आवश्यक किन पर्‍यो त भन्दा योसँग सम्बन्धित कुरा थियो । अरु लथालिंग परेका प्रोजेक्टहरु अगाडि बढाउन किन जोड गर्नुपर्‍यो त भन्दाखेरि यहाँ लोडसेडिङसँग सम्बन्धित कुराहरु छन् ।
काम गर्दै जाँदा के लाग्यो भने नेतृत्व पनि टीम स्पीरिट गर्ने चाहिन्छ भन्ने लाग्यो । र, मैले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गरें ।
कुलमान घिसिङजीलाई मैले सिधै भनेकै कुरा यही हो, तपाईं १० बजे, ११ बजे राति पनि खट्नुपर्छ । एमडी, कार्यकारी भनेर अफिसमा बसेको म हेर्न चाहँदैन, तपाईं फिल्डमा खटेको हुनुपर्छ । तपाईं नखटे कर्मचारी खट्दैनन् भनेर सिधै-सिधै भनेको थिएँ उहाँलाई । मैले बेला-बेला फोन गरेर चेक पनि गरें । ११ बजे, १० बजे फोन गर्दाखेरि उहाँले म फलानो सबस्टेशनमा छु भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो ।
त्यसपछि मैले टार्जेट थपें । अब तिहार र छठ उज्यालो बनाउनुस् भनें । उहाँ लाग्नुभयो । उहाँ विज्ञ पनि हो त्यसको ।
आवश्यकभन्दा बढी बिजुली कसैलाई दिइएको छ । सोर्सफोर्समा दिइएको छ । डकुमेन्टहरु छन्, भोलि सार्बजनिक गरौंला
सुधार गर्ने, मर्मत गर्ने, लिकेजहरुलाई रोक्ने काम पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो । उहाँले त्यो कुरालाई अझ मेहेनतका साथ गर्नुभयो र अहिले लोड व्यवस्थापन गरिएको हो । अहिले लोड व्यवस्थापनद्वारा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भयो । देशभर लोडसेडिङ हटाउने योजनामा छौं ।
उसोभए लोडसेडिङ सधैंका लागि हट्ला त अब ?
यो विद्युत नक्कली पनि होइन, अहिले कहीँबाट थप विद्युत ल्याइएको पनि छैन । मात्र लोड व्यवस्थापन गरिएको हो । हिजोको वितरणमा समस्या छ । के छ अहिले सबै म भन्दिनँ । रिपोर्टहरु आएपछि भन्छु । आवश्यकभन्दा बढी बिजुली कसैलाई दिइएको छ । सोर्सफोर्समा दिइएको छ । व्यवस्थापनहरुले सही गरेर दिएका छन् । डकुमेन्टहरु छन्, भोलि सार्बजनिक गरौंला । जनतालाई लोडसेडिङको तालिका दिने र अरुलाई विद्युत दिने गर्दाखेरिको परिणाम नेपाली जनता लोडसेडिङको मारमा पर्दै आएका थिए । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्दा अहिले लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको छ । अब लोडसेडिङ तालिका आउदैन ।
हिजो नारायणहिटीको बिजुली काट्दा गाली गर्नेहरुले अहिले तपाईंलाई बधाइ दिइरहेका छन् । यसबाट कस्तो लागेको छ ?
मलाई विश्वास के पैदा भएको छ भने जनताले साथ दिँदा, व्यवसायीले साथ दिँदा र सञ्चारकर्मीले साथ दिँदा यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने मसँग आत्मविश्वास छ ।
प्रेरणा र आत्मविश्वासले मात्रै काम त हुँदैन । ठोस कार्यक्रम के छ ?
ठीक भन्नुभयो । आत्मविश्वासले मात्रै काम हुँदैन । यसमा दुईवटा पक्ष छन् । एउटा हामीलाई इनर्जी चाहियो । आपूर्ति गर्नुपर्‍यो र कहीँ न कहीँबाट थप्नुपर्‍यो । दोस्रो कुरा भएको इनर्जीको सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । कमभन्दा कम इनर्जी प्रयोग गरेमा सदुपयोग हुन्छ । कसरी इनर्जीको आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रालयको, प्राधिकरणसँग सम्बन्धित छ । त्यसैअनुसार हामीले लोड व्यवस्थापन गरेका हौं ।
यसबाहेक हामी वैकल्पिक स्रोतहरुको पनि खोजीमा छौं । त्यसका लागि दशैंअघि नै मैले सूचना निकाल्न लगाएको थिएँ । कसले कुन समयमा कति दिन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । त्यसमा चासो देखाउँदै १५(१६ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । तिनका बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।
उद्योगपतिहरु कसैले बढी बिजुली पाएको र कसैले पाउँदै नपाएको गुनासो थियो । अहिले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ रु
अहिले हामीले उद्योगहरुमा पिक आवरमा बत्ति नबाल्न भनेका छौं । पहिले उहाँहरुले अनेकौं खर्च गरेर १६ घण्टा बत्ति बाल्न पाउनु भएको रहे छ । अहिले निःशुल्क पाएको भनेको २० घण्टा हो । उहाँहरु यसबाट एकदम खुसी हुनुहुन्छ । व्यवसायमा वृद्धि भएको सुनाउनु भयो । पर्यटन व्यवसायमा नयाँ उत्साह आएको सुनाउनु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो भएको, चोरी अपराध कम भएको भनेर प्रहरीहरुले सुनाउनु भयो ।
त्यतिमात्र होइन इन्धन आयातमा १५-२० अर्ब रकम जोगिएको भनेर सुनाउनु भएको छ । हेर्दाखेरि सामान्य बत्ति बाल्ने कुरा न थियो, तर यसको बहुआयामिक प्रभाव रहेछ भन्ने कुरा धेरैपछि थाहा भयो । अहिले म उत्साहितसँगै निकै गम्भीर पनि छु । अझै बढी चुनौति थपिएको महसुस भएको छ ।
अहिले पनि कर्मचारीलाई भनेको छु, तार र नट बोल्टतिर ध्यान नदिनुहोस् । बरु तपाईंहरु अरुणमा (अरुण तेस्रो) शेयर हाल्दिने वातावरण बनाइदिन्छु भनेको छु।
जनतालाई लोडसेडिङको तालिका दिने र कमिसन खाँदै उद्योगपतिलाई बिजुली दिने काम भएको बताउनु भयो । त्यस्ता गलत क्रियाकलापलाई गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु हुन्छ ?
अहिले त्यसबारे केही पनि नभनौं । यसको व्यवस्थित रिपोर्ट मैले माग गरेको छु । के कारणले आज लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भयो र के कारणले हिजो सम्भव थिएन रु हिजो किन सम्भव भएन रु यी कुराको अध्ययनसहितको रिपोर्ट आएपछि सार्वजनिक गरौंला । पहिले रिपोर्ट हेरौं । कुनखालको रिपोर्ट आउँछ, कारण के हो, त्यस आधारमा निर्णय गरौंला ।
लोडसेडिङ जारी राख्नुपर्छ भनेर तपाईलाई दबाव आएनन् रु कुलमानलाई त कार्यालयमै छिर्न नदिने ट्रेड युनियनका कर्मचारीले धम्की दिएको सुनियो‘।
कतिपय मन्त्रीहरुले भन्ने गर्छन्,व्युरोक्रेसीले असहयोग गरेर काम गर्न सकिएन भनेर । तपाईंले आफ्ना कर्मचारीबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
म मन्त्री भएर आइसकेपछि पहिलो दिन नै मैले यो कुरा भनेको छु( हाम्रो सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नुपर्छ । लोडसेडिङले ग्रस्त भएका जनतालाई हामीले राहत दिनुपर्छ भनेर मैले गियर बदल्छु, मसँग दौडिन तयार होऊ भनेर कर्मचारीहरुलाई भनेको छु । मैले कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप केही निर्णय पनि गराएको छु । त्यससँगै मैले चेतावनी पनि दिएको छु, सही काम नगर्नेलाई मैले कारबाही गर्छु । असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छु र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्छु भनें ।
अहिले पनि कर्मचारीलाई भनेको छु, तार र नट बोल्टतिर ध्यान नदिनुहोस् । बरु तपाईंहरु अरुणमा ९अरुण तेस्रो० शेयर हाल्दिने वातावरण बनाइदिन्छु भनेको छु ।
कर्मचारीलाई सुविधा दिने पनि हो, फाइदा हुने बाटो पनि देखाउने हो । तर, दिन पनि नचाहने र समस्या पनि पैदा गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहुँदैन ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भनेर तपाईंले बनाएको नारा अहिले चर्चामा छ । जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनुस् न, यो के हो ?
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मैले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा बनाएको हुँ । यो नारा राष्ट्रिय स्वाधीनता आत्मर्निभरताको नारा हो । नेपाली जनतासँग भएको पैसाको सदुपयोग गर्ने र राष्ट्रलाई सम्वृद्ध बनाउने उद्देश्य हो । प्रत्येक व्यक्तिले फाइदा लिने पनि हो ।
नाफा आउने प्रोजेक्टमा ३० प्रतिशत जनताको पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने हो नीति बनाएको छु । त्योअनुसार लगानी गर्ने योजना अगाडि बढाउँछु ।
तपाईंले सेना लगायत सुरक्षा संगठनहरुलाई पनि हाइड्रोमा लगानीका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको प्रगति के छ ?
जलविद्युत उत्पादन कम्पनी मैले १५-२० दिनमा दर्ता गर्छु भनेको थिएँ तर ३ महिनापछि बल्ल प्रमाणपत्र हात लागेको छ । त्यो कम्पनीले विभिन्न परियोजनाहरु अगाडि बढाउँछ ।
वबलबचमबल(कजबचmब(उचबखबपबच(ठउतातिर प्राधिकरणले पनि विभिन्न आयोजनाहरु अगाडि बढाउँदैछ । यो अहिलेको कम्पनीभित्र नै नागरिक लगानी कोषको, सञ्चय कोषको, वीमा संस्थानको, टेलिकमको शेयर छ । कति प्रतिशत शेयर रहने भनेर तोकेको छ । यसमा लगानी हुँदै जान्छ । यसमा सेनालगायतको पनि लगानी हुँदै जान्छ ।
भारतबाट बिजुली ल्याइन्छ कि ल्याइँदैन ?
अन्त्यमा आम उपभोक्ताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अर्को कुरा, जनताको सहयोग मैले कहाँनेर अपेक्षा गरेको छु भने पिक आवरको समयमा बढी विद्युत खपत हुने साधनहरु प्रयोग नगरिदिने । आवश्यक परेका बेलामात्रै बत्ति बाल्दिने, अर्थात् बिजुलीको प्रयोग कमभन्दा कम गरिदिने, बिजुली चोरी भएको सूचना दिने र सीएफएल चिमको सट्टा त्योभन्दा पनि कम बिजुली खपत हुने लिडको प्रयोग गरिदिने हो भने यो लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ । अनलाइनखबरबाट
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Tagged उर्जा मन्त्रालय, जनार्धन शर्मा | Leaveareply